Ny tombony amin'ny marketing sy ny varotra amin'ny automatisation marketing | Martech Zone
Zoma, Septambra 12, 2014 Zoma, Septambra 12, 2014 Douglas Karr
Araka ny CSO Insights, ireo orinasa manana taranaka mitarika sy fitantanana matotra dia manana 9.3% tahan'ny zava-bita avo lenta. Eto no misy ny sehatra fanaovana varotra toa ny mpanohana anay Salesvue nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fanatsarana ny fanaovana tatitra sy ny fahombiazan'ny ekipa mampiasa Salesforce - manome a manantena ny vahaolana automatisation pipeline. Tsy ny fanodinam-barotra ihany no manampy ny solontenan'ny mpivarotra hanjary mahomby sy mahomby kokoa.
Na eo aza ny fivarotana an-taonany maro ho fitaovana ho an'ny, mpivarotra, ny automatisation dia manova ny endrika departemantan'ny varotra maoderina ihany koa. Ireo orinasa izay mampihatra ny vahaolana amin'ireo ekipam-barotra dia tsy ho ela dia mahita fa ny automatisation dia mihoatra lavitra ny faritry ny marketing. Tsy resy lahatra? Ny fampiakarana ny zava-bitan'ny quota saika eo amin'ny 10% dia tsy mametraka vola be fotsiny ao am-paosin'ny solo-draharahan'ny varotrao, fa mandeha lavitra ihany koa amin'ny fampifanarahana ny ezaky ny varotra sy ny varotra ary mandray anjara betsaka amin'ny fahombiazan'ny fihodinan'ny orinasa iray. Matt Wesson, Pardot
Ny automatisation marketing dia mitondra fahitana sarobidy amin'ny ekipan'ny varotrao izay afaka manampy ny solontenan'ny mpivarotra hahatakatra ny filan'ny mpanjifa. Ahoana no nandrenesan'izy ireo ny momba ny vokatrao sy ny serivisinao? Inona no angon-drakitra nomen'izy ireo tamin'ny endrika miresaka momba ny fahaizany mitarika? Inona ireo teny lakile notadiavin'izy ireo rehefa tonga teny amin'ilay tranonkala izy ireo? Inona ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny media sosialy? Inona ireo mailaka nosoratan'izy ireo? Pejy inona no notsidihin'izy ireo? Inona ireo rindrambaiko fotsy navoakan'izy ireo na hetsika nosoratan'izy ireo?
Ity karazana fampahalalana ity dia mety ho sarobidy tokoa amin'ny solontenan'ny mpivarotra hiomanana amin'ny antso na mailaka manaraka miaraka amin'ny fanantenana. Azonao atao mihitsy aza ataovy lohalaharana ny ezaka ataonao amin'ny alàlan'ny isa amin'ny firaka hahita sy hanidy ny fitarihana izay azo inoana fa mpanjifa lehibe.
Tags: mitarika faharanitan-tsainascoring firakapardotvahaolana fantsonavahaolana manantenavarotra mandeha ho azytabilao fivarotanaFanamafisana ny varotrafantsom-pivarotanavarotra prospectingrindrambaiko salesforceautomatique salesforcevarotra